चितामा जलिरहेको लाश झिकेर खाने अघोरी बाबा, जसले १३६ जना मानिस खाए - Dainik Online Dainik Online
चितामा जलिरहेको लाश झिकेर खाने अघोरी बाबा, जसले १३६ जना मानिस खाए
काठमाडौं । चितामा जलिरहेको लाश झिकेर खाने व्यक्तिको भारतको मुरादावादमा हत्या भएको छ ।
दिपावलीको दिन मुरादावादमा एकजना बाबाको हत्या भएपछि उक्त व्यक्ति र चेलाले अहिलेसम्म १३६ जना मानिसको लाश खाएको रहस्य खुलेको छ ।
पछिल्लो पटक एक युवतिको चितामा जल्दैगरेको लाश झिकेर खाएको आरोपमा उक्त युवतीको भाईले त्यो लाश खाने व्यक्ति र उसका चेलाहलाई मारिदिएको थियो । उसलाइ पक्रेर त्यो तथाकथित बाबालाई र उसका साथीलाई मार्नुको कारण सोधपुछ गर्दा त्यसको कारण अचम्म लाग्दो रहेछ ।
केहीदिन अगाडी त्यो बाबाले हत्यारोपी युवाकी बहिनीको जली रहेकी लाश चिताबाट झिकेर खाएको आफै स्विकार गरेपछि हत्या गरिएको बुझिन आएको छ ।
त्यो अघोरी बाबाको हत्या भएको हल्ला फैलिनासाथ त्यहाँ अन्य परिवारहरु पनि जम्मा भएका भएका थिए जसका परिवारका सदस्यहरुको शव त्यो बाबाले खाई सकेका थिए । बाबाले चितामा लाश अलिकति जल्नासाथ पानीहलेर सेलाउन हाल्दथ्यो र पछि त्यो लाशबाट महत्वपुर्ण अंग झिकेर खाने गर्दथ्यो ।
अंकुश भन्ने व्यक्तिले बहिनीको लाशबाट महत्वपुर्ण अंग कसले झिक्यो भनेर मसानघाट नजिग बस्ने राजेन्द्र गिरी नाम बाबालाई सोध्दा तन्त्र विद्या साधनाका लागि उसले यसरी लाश खानेगरेको बताएका थियो । त्यो सुनेपछि अंकुशले बाबा राजेन्द्र गिरी र एक चेला नितेशलाई मारिदिएका थिए । यो घटना छानविन गर्दै जादा एक बर्षमा १३६ लाश खाएको प्रहरीले बताएको छ ।
एकैपटक १० शिशु जन्माएर यी महिलाले राखिन् विश्व रेकर्ड
कसरी बनिन उनी एकै वर्षमा २० बच्चाकी आमा ? थाहा पाउँदा जो पनि हुन सक्छ हैरान !
मानिस सँग कुरा गर्ने कुकुर , मालिकको कुरा सुनेर तुरुन्तै दिन्छ जवाफ ! (भिडियो सहित)
अनौठो जीव भेटियो आधा पोथी आधा भाले
किन स्पेनका पुरुष शिक्षकहरू स्कर्ट लगाएर स्कुल आउन थाले ?